အမေရိက - ဝီကီပီးဒီးယား
၄၂,၅၄၉,၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၆,၄၂၈,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်)
၁,၀၀၁,၅၅၉,၀၀၀ (၂၀၁၆ ခန့်မှန်း)
$၂၄.၆ ထရီလီယံ (၂၀၁၆ ခန့်မှန်း)
American, New Worlder
စပိန်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ပြင်သစ်၊ Haitian Creole, Quechua, Guaraní, Aymara, Nahuatl, Dutch နှင့် အခြား
UTC-10 မှ UTC
အမေရိက ဟူသည် အနောက်ကမ္ဘာလုံးခြမ်းရှိ မြောက်အမေရိက နှင့် တောင်အမေရိက တိုက်နှစ်ခု၏ ကုန်းမြေများကို ပေါင်း၍ ခေါ်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာသစ် ဟူ၍လည်း ခေါ်ကြသေးသည်။ ဆက်စပ်နေသော ကျွန်းစုများကိုပါ ထည့်သွင်းရေတွက်ပါက အမေရိက သည် ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်စုစုပေါင်း၏ ၈.၃% (ကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာပြင်၏ ၂၈.၄%) ကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။
၂ နိုင်ငံများနှင့် နယ်မြေဒေသများ
ဘီစီ ၄၀၀၀၀ နှင့် ဘီစီ ၁၅၀၀၀ အကြားလောက်တွင် အာရှမှ လူများ အမေရိကသို့ ရောက်ရှိ အခြေချခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယမြောက် ပြောင်းရွေ့အခြေချသူများမှာ အာရှမှ နဒီနိုက်စကားပြောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ၃၅၀၀ ဘီစီဝန်းကျင်တွင် အင်နူရစ်လူမျိုးများ နီယိုအာတိတ် (မြောက်အမေရိကအာတိတ်ဒေသ) သို့ပြောင်းရွေ့နေထိုင်မှု၏ အကျိုးဆက်ကြောင့် အမေရိက၏ ဒေသခံလူမျိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။
အမေရိကသို့ ဥရောပမှ ဦးစွာအခြေချသူမှာ နော့စ်လူမျိုး နယ်သစ်ရှာဖွေသူ Leif Erikson ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း နယ်ချဲ့မှုမှာ အတည်တကျဖြစ်မလာပဲ နောက်ပိုင်းတွင် စွန့်ခွာသွားခဲ့သည်။ ၁၄၉၂ မှ ၁၅၀၂ ခုနှစ်အကြား ခရစ္စတိုဖာ ကိုလံဘတ်၏ ရေကြောင်းခရီးက အမေရိကသို့ ဥရောပ၏တန်ခိုးအာဏာ လွှမ်းခြုံစေခဲ့သည်။ ဥရောပနှင့် အာဖရိကမှ ရောဂါများက ဒေသခံလူမျိုးများအား အကြီးအကျယ် ထိခိုက်ခဲ့သည်။ အလုပ်သမားမြောက်များစွာပါဝင်သော ဥရောပသားများ အကြီးအကျယ် ရွေ့ပြောင်းလာမှုနှင့် အာဖရိကကျွန်များအား အတင်းအကြပ် ရွေ့ပြောင်းစေမှုတို့က ဒေသခံလူမျိုးများနေရာကို အစားထိုးယူခဲ့သည်။ ၁၇၇၆ ခုနှစ် အမေရိကန်တော်လှန်ရေးနှင့် ၁၇၉၁ ခုနှစ် ဟေရှန်တော်လှန်ရေးများက ဥရောပ၏ အမေရိက ကိုလိုနီများကို လက်လွှတ်ခဲ့ရသည်။
ယခုအချိန်တွင် အမေရိကမှ လူများမှာ လွတ်လပ်သောနိုင်ငံများတွင် နေထိုင်နေကြသော်လည်း ဥရောပသားများ၏ ပြောင်းရွေ့အခြေချမှုနှင့် ကိုလိုနီပြုမှုတို့က ဥရောပယဉ်ကျေးမှုများဖြစ်သည့် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ အင်ဒိုယူရိုပီယန်ဘာသာစကားများ (အဓိကအားဖြင့် စပိန်ဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နှင့် ပေါ်တူဂီဘာသာ) ကို အမေရိကသို့ ရောက်ရှိပြန့်နှံ့စေခဲ့သည်။
အမေရိကတွင် လူဦးရေ သန်းကိုးရာခန့် နေထိုင်လျက်ရှိကြသည်။ လူဦးရေအထူထပ်ဆုံးနိုင်ငံများမှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံနှင့် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံများ ဖြစ်ကြပြီး လူဦးရေအထူထပ်ဆုံးမြို့များမှာ ဆောပိုလိုမြို့၊ မက္ကဆီကိုမြို့နှင့် နယူးယောက်မြို့တို့ ဖြစ်ကြသည်။
နိုင်ငံ သို့ ဒေသ
ဘာသာစကား (ရုံးသုံး − စာလုံးအထူ)
ပြည်တွင်းအသားတင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု (GDP) အမေရိကန်ဒေါ်လာ 
အန်ဂီလာ (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7001910000000000000♠91 7004134520000000000♠13452 7002164800000000000♠164.8 အင်္ဂလိပ်ဘာသာ The Valley 7008175400000000000♠$175400000
အင်တီဂွါနှင့် ဘာဘူဒါ 7002442000000000000♠442 7004862950000000000♠86295 7002199100000000000♠199.1 ကပြားစကား၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စိန့်ဂျွန်မြို့ 7009160500000000000♠$1605000000
အာဂျင်တီးနား 7006276689000000000♠2766890 7007426695000000000♠42669500 7001143000000000000♠14.3 စပိန်ဘာသာ ဗျူနိုအေးရိစ်မြို့ 7011777900000000000♠$777900000000
အာရူးဗာ (နယ်သာလန်) 7002180000000000000♠180 7005101484000000000♠101484 7002594400000000000♠594.4 Papiamentu၊ စပိန်ဘာသာ၊ ဒတ်ချ်ဘာသာ Oranjestad 7009251600000000000♠$2516000000
ဘဟားမား 7004139430000000000♠13943 7005351461000000000♠351461 7001245000000000000♠24.5 ကပြားစကား၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နာဆောမြို့ 7010112400000000000♠$11240000000
ဘာဘေးဒိုးစ် 7002430000000000000♠430 7005285000000000000♠285000 7002595290000000000♠595.3 Bajan၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဘရစ်ချ်တောင်းမြို့ 7009716900000000000♠$7169000000
ဘလိဇ် 7004229660000000000♠22966 7005349728000000000♠349728 7001134000000000000♠13.4 စပိန်ဘာသာ၊ Kriol၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဘယ်မိုပန်မြို့ 7009304800000000000♠$3048000000
ဘာမြူဒါ (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7001540000000000000♠54 7004642370000000000♠64237 7003120370000000000♠1203.7 အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဟယ်မင်တန်မြို့ 7009560000000000000♠$5600000000
ဘိုလီးဗီးယား 7006109858000000000♠1098580 7007100272540000000♠10027254 7000840000000000000♠8.4 စပိန်ဘာသာ၊ Quechua၊ Aymara၊ ဒေသဘာသာစကား ၃၅ မျိုး La Paz နှင့် Sucre  7010561400000000000♠$56140000000
တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း Bonaire (နယ်သာလန်) 7002294000000000000♠294 7004120930000000000♠12093 7001411000000000000♠41.1 Papiamentu၊ စပိန်ဘာသာ၊ ဒတ်ချ်ဘာသာ Kralendijk
ဘရာဇီး 7006851487700000000♠8514877 7008203106000000000♠203106000 7001236000000000000♠23.6 ပေါ်တူဂီဘာသာ ဘရာဇီးလီးလားမြို့ 7012242300000000000♠$2423000000000
ဗြိတိသျှ ဗာဂျင်အိုင်းလန်း (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7002151000000000000♠151 7004295370000000000♠29537 7002152300000000000♠152.3 အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ရုတ်တောင်းမြို့ 7008500000000000000♠$500000000
ကနေဒါ 7006998467000000000♠9984670 7007354275240000000♠35427524 7000340000000000000♠3.4 အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ ပြင်သစ်ဘာသာ အော့တဝါမြို့ 7012152600000000000♠$1526000000000
ကေမန်ကျွန်းစု (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7002264000000000000♠264 7004554560000000000♠55456 7002212100000000000♠212.1 အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဂျော့ချ်တောင်းမြို့ 7009225000000000000♠$2250000000
ချီလီ 7005756950000000000♠756950 7007177730000000000♠17773000 7001220000000000000♠22 စပိန်ဘာသာ ဆန်တီယာဂိုမြို့ 7011334800000000000♠$334800000000
ကလစ်ပါတွန်ကျွန်းစု (ပြင်သစ်) 7000600000000000000♠6 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0.0 မရှိ — 5000000000000000000♠$0
ကိုလံဘီယာ 7006113891000000000♠1138910 7007477570000000000♠47757000 7001400000000000000♠40 စပိန်ဘာသာ Bogotá 7011527600000000000♠$527600000000
ကော့စတာရီကာ 7004511000000000000♠51100 7006466709600000000♠4667096 7001896000000000000♠89.6 စပိန်ဘာသာ ဆန်ဂျို့စ်မြို့ 7010451300000000000♠$45130000000
ကျူးဘား 7005109886000000000♠109886 7007111673250000000♠11167325 7002102000000000000♠102.0 စပိန်ဘာသာ ဟာဗားနားမြို့ 7011121000000000000♠$121000000000
ကျူရာဆိုး (နယ်သာလန်) 7002444000000000000♠444 7005150563000000000♠150563 7002317100000000000♠317.1 Papiamentu၊ ဒတ်ချ်ဘာသာ Willemstad 7009283800000000000♠$2838000000
ဒိုမီနီကာ 7002751000000000000♠751 7004712930000000000♠71293 7001892000000000000♠89.2 စပိန်ဒေသိယဘာသာ, အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ရိုဆူးမြို့ 7009101800000000000♠$1018000000
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ 7004486710000000000♠48671 7007103782670000000♠10378267 7002207300000000000♠207.3 စပိန်ဘာသာ ဆန်တိုဒိုမင်ဂိုမြို့ 7011100400000000000♠$100400000000
အီကွေဒေါ 7005283560000000000♠283560 7007158194000000000♠15819400 7001538000000000000♠53.8 စပိန်ဘာသာ၊ Quechua ကွီတိုမြို့ 7011159000000000000♠$159000000000
အယ်ဆာဗေဒို 7004210410000000000♠21041 7006640124000000000♠6401240 7002293000000000000♠293.0 စပိန်ဘာသာ ဆန်ဆာဗေဒိုမြို့ 7010470900000000000♠$47090000000
ဖော့ကလန်ကျွန်းစု (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7004121730000000000♠12173 7003300000000000000♠3000 6999260000000000000♠0.26 အင်္ဂလိပ်ဘာသာ Port Stanley 7008164500000000000♠$164500000
ပြင်သစ်ဂီအားနား (ပြင်သစ်နိုင်ငံ) 7004910000000000000♠91000 7005237549000000000♠237549 7000270000000000000♠2.7 ပြင်သစ်ဘာသာ Cayenne
ဂရင်းလန်း (ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ) 7006216608600000000♠2166086 7004564830000000000♠56483 6998260000000000000♠0.026 ဂရင်းလန်းဒစ်၊ ဒတ်ချ်ဘာသာ Nuuk (Godthåb) 7009213300000000000♠$2133000000
ဂရီနေဒါ 7002344000000000000♠344 7005103328000000000♠103328 7002302300000000000♠302.3 အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စိန့်ဂျော့ရှ်မြို့ 7009146700000000000♠$1467000000
ဂွါဒီလု (ပြင်သစ်) 7003162800000000000♠1628 7005405739000000000♠405739 7002246700000000000♠246.7 ပြင်သစ်ဘာသာ Basse-Terre
ဂွါတီမာလာ 7005108889000000000♠108889 7007158066750000000♠15806675 7002128800000000000♠128.8 စပိန်ဘာသာ, Garifuna and 23 Mayan languages ဂွါတီမာလာမြို့ 7010799700000000000♠$79970000000
ဂိုင်ယာနာ 7005214999000000000♠214999 7005784894000000000♠784894 7000350000000000000♠3.5 အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဂျော့ရှ်တောင်းမြို့ 7009625600000000000♠$6256000000
ဟေတီ 7004277500000000000♠27750 7007107456650000000♠10745665 7002361500000000000♠361.5 ကပြားစကား၊ ပြင်သစ်ဘာသာ ပေါ့တ်အော်ရ်ပရင့်စ်မြို့ 7010131500000000000♠$13150000000
ဟွန်ဒူးရပ်စ် 7005112492000000000♠112492 7006855507200000000♠8555072 7001664000000000000♠66.4 စပိန်ဘာသာ တေဂူဆီဂါလ်ပါမြို့ 7010384200000000000♠$38420000000
ဂျမေကာ 7004109910000000000♠10991 7006271799100000000♠2717991 7002247400000000000♠247.4 ဒေသိယစကား၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကင်းစတန်မြို့ 7010256200000000000♠$25620000000
မာတီနစ် (ပြင်သစ်) 7003112800000000000♠1128 7005392291000000000♠392291 7002352600000000000♠352.6 ဒေသိယစကား၊ ပြင်သစ်ဘာသာ Fort-de-France
မက္ကဆီကို 7006196437500000000♠1964375 7008119713203000000♠119713203 7001571000000000000♠57.1 စပိန်ဘာသာနှင့် ဒေသဘာသာစကား ၆၈ မျိုး မက္ကဆီကိုမြို့ 7012184300000000000♠$1843000000000
မွန်ဆာရတ် (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7002102000000000000♠102 7003492200000000000♠4922 7001588000000000000♠58.8 အင်္ဂလိပ်ဘာသာ Plymouth; Brades 7007437800000000000♠$43780000
နဗေးဆားကျွန်း (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) 7000500000000000000♠5 5000000000000000000♠0 5000000000000000000♠0.0 မရှိ — 5000000000000000000♠$0
နီကာရာဂွါ 7005130373000000000♠130373 7006607104500000000♠6071045 7001441000000000000♠44.1 စပိန်ဘာသာ မနာဂွါမြို့ 7010271000000000000♠$27100000000
ပနားမား 7004754170000000000♠75417 7006340581300000000♠3405813 7001458000000000000♠45.8 စပိန်ဘာသာ ပနားမားမြို့ 7010580200000000000♠$58020000000
ပါရာဂွေး 7005406750000000000♠406750 7006678337400000000♠6783374 7001156000000000000♠15.6 Guaraní၊ စပိန်ဘာသာ အဆွန်စီယုန်းမြို့ 7010415500000000000♠$41550000000
ပီရူး 7006128522000000000♠1285220 7007308141750000000♠30814175 7001220000000000000♠22 စပိန်ဘာသာ၊ Quechua၊ Aymara Lima 7011344200000000000♠$344200000000
ပေါ်တိုရီကို (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) 7003887000000000000♠8870 7006361508600000000♠3615086 7002448900000000000♠448.9 စပိန်ဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ San Juan 7011127000000000000♠$127000000000
တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း Saba (နယ်သာလန်) 7001130000000000000♠13 7003153700000000000♠1537 7002118200000000000♠118.2 အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ ဒတ်ချ်ဘာသာ The Bottom
Saint Barthélemy (ပြင်သစ်) 7001210000000000000♠21 7003893800000000000♠8938 7002354700000000000♠354.7 ပြင်သစ်ဘာသာ Gustavia
စိန့်ကစ်နှင့် နီးဗစ် 7002261000000000000♠261 7004550000000000000♠55000 7002199200000000000♠199.2 အင်္ဂလိပ်ဘာသာ Basseterre 7008946300000000000♠$946300000
စိန့်လူစီယာ 7002539000000000000♠539 7005180000000000000♠180000 7002319100000000000♠319.1 အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ ပြင်သစ်ကပြားဘာသာ ကက်စထရီမြို့ 7009223300000000000♠$2233000000
စိန့်မာတင် (ပြင်သစ်) 7001540000000000000♠54 7004369790000000000♠36979 7002552200000000000♠552.2 ပြင်သစ်ဘာသာ Marigot 7008561500000000000♠$561500000
Saint Pierre and Miquelon (ပြင်သစ်) 7002242000000000000♠242 7003608100000000000♠6081 7001248000000000000♠24.8 ပြင်သစ်ဘာသာ Saint-Pierre 7008215300000000000♠$215300000
စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် ဂရိနေဒိုင် 7002389000000000000♠389 7005109000000000000♠109000 7002280200000000000♠280.2 အင်္ဂလိပ်ဘာသာ Kingstown 7009131200000000000♠$1312000000
တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း Sint Eustatius (နယ်သာလန်) 7001210000000000000♠21 7003273900000000000♠2739 7002130400000000000♠130.4 ဒတ်ချ်ဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ Oranjestad
Sint Marrten (နယ်သာလန်) 7001340000000000000♠34 7004374290000000000♠37429 7003117670000000000♠1176.7 အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ စပိန်ဘာသာ၊ ဒတ်ချ်ဘာသာ Philipsburg 7008798300000000000♠$798300000
တောင်ဂျော်ဂျီယာနှင့် တောင်ဆန်းဒဝစ်ကျွန်းများ (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7003309300000000000♠3093 7001200000000000000♠20 6998100000000000000♠0.01 အင်္ဂလိပ်ဘာသာ Grytviken
ဆူရာနမ် 7005163270000000000♠163270 7005534189000000000♠534189 7000300000000000000♠3 ဒတ်ချ်ဘာသာ၊ Hindi-Urdu၊ Srana၊ Javanese၊ အင်္ဂလိပ်ကပြားဘာသာ ပါရာမာရီဘိုမြို့ 7009687400000000000♠$6874000000
ထရီနီဒတ်နှင့် တိုဘက်ဂို 7003513000000000000♠5130 7006132801900000000♠1328019 7002261000000000000♠261.0 အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ပို့တ်အော့ဖ်စပိန်မြို့ 7010271400000000000♠$27140000000
တာ့ခ်နှင့် ကေးကို့စ်ကျွန်းများ (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) 7002948000000000000♠948 7004314580000000000♠31458 7001348009999900000♠34.8 အင်္ဂလိပ်ကပြားဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ Cockburn Town 7008632000000000000♠$632000000
အမေရိကန်[note ၁]}} 7006962909100000000♠9629091 7008318690000000000♠318690000 7001342000000000000♠34.2 အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ စပိန်ဘာသာ ဝါရှင်တန်ဒီစီ 7013168000000000000♠$16800000000000
အမေရိကန် ဗာဂျင်အိုင်းလန်း (United States) 7002347000000000000♠347 7005106405000000000♠106405 7002317000000000000♠317.0 အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ စပိန်ဘာသာ Charlotte Amalie
ဥရုဂွေး 7005176220000000000♠176220 7006328631400000000♠3286314 7001194009999900000♠19.4 စပိန်ဘာသာ မွန်တီဗစ်ဒီအိုမြို့ 7010546700000000000♠$54670000000
ဗင်နီဇွဲလား 7005916445000000000♠916445 7007302063070000000♠30206307 7001302000000000000♠30.2 စပိန်ဘာသာနှင့် ဒေသဘာသာ ၄၀ မျိုး ကရာကတ်စ်မြို့ 7011407900000000000♠$407900000000
7007423209850000000♠42320985 7008953700000000000♠953700000 7001219000000000000♠21.9 7013248640000000000♠$24864000000000
↑ "American"၊ Oxford English Dictionary (3rd ed.)၊ Oxford University Press၊ September 2005 မရေရာသော |mode=CS1 (အကူအညီ) (Subscription or UK public library membership required.)
↑ "New Worlder"၊ Oxford English Dictionary (3rd ed.)၊ Oxford University Press၊ September 2005 မရေရာသော |mode=CS1 (အကူအညီ) (Subscription or UK public library membership required.)
↑ "Leif Erikson (11th century)"၊ BBC။ November 20, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Unless otherwise noted, land area figures are taken from "Demographic Yearbook—Table 3: Population by sex, rate of population increase, surface area and density" (PDF) (2008). United Nations Statistics Division. Retrieved on October 14, 2010.
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named PopulationofAmericas
↑ Sara Louise Kras (2008)။ Antigua and Barbuda။ Marshall Cavendish။ p. 95။ ISBN 0-7614-2570-5။
↑ Aruba Census 2010 Languages spoken in the household။ Central Bureau of Statistics။ 13 November 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5December 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Paul M. Lewis (2009)။ Languages of Bahamas။ Ethnologue။
↑ Paul M. Lewis:Languages of Barbados။ Ethnologue: Languages of the World (2009)။
↑ Belize 2000 Housing and Population Census။ Belize Central Statistical Office (2000)။ 12 July 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ June 24, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ La Paz သည် ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေးမြို့ဖြစ်သည်။;
↑ ၁၂.၀ ၁၂.၁ Households by the most spoken language in the household Population and Housing Census 2001။ Central Bureau of Statistics။ 29 October 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5December 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Includes Easter Island in the Pacific Ocean,aChile an territory frequently reckoned in Oceania. Santiago is the administrative capital of Chile; Valparaíso is the site of legislative meetings.
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ ၁၄.၂ ၁၄.၃ Land area figures taken from The World Factbook: 2010 edition။ Government of the United States, Central Intelligence Agency။ 31 January 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ ၁၅.၂ These population estimates are for 2010, and are taken from The World Factbook: 2010 edition။ Government of the United States, Central Intelligence Agency။ 25 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Paul M. Lewis, M. Paul:Languages of Dominica။ Ethnologue: Languages of the World (2009)။ August 30, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ David Levinson (1998)။ Ethnic Groups Worldwide: A Ready Reference Handbook။ Greenwood Publishing Group။ p. 347။ ISBN 1-57356-019-7။
↑ Claimed by အာဂျင်တီးနား.
↑ Paul M. Lewis:Languages of Martinique။ Ethnologue (2009)။
↑ Paul M. Lewis:Languages of Montserrat။ Ethnologue (2009)။
↑ ၂၂.၀ ၂၂.၁ Population estimates are taken from the Central Bureau of Statistics Netherlands Antilles။ Statistical information: Population။ Government of the Netherlands Antilles။ 1 May 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lewis၊ Paul (2009)။ Languages of Suriname။ Ethnologue။
↑ Lewis၊ M. Paul (2009)။ Languages of Turks and Caicos Islands။ Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition။ SIL International။ 24 December 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5December 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အမေရိက&oldid=726039" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။